Nzira yekuwedzera kudanana kwako naMwari mumatanho mashanu ▷ ➡️
Ungawedzera sei kushamwaridzana kwako naMwari mumatanho mashanu. Munhu imhuka yemagariro. Tinofanira kudyidzana zvakanyanya nevanhu vatinodaTinoda rudo uye rudo rwevamwe vanhu kuvaka nyika yedu yemukati.
Nekudaro, iyo chete nzira yeku kuvaka ushamwari hwedu naJehovha kuitira kuti nyika yedu yemukati izere kuburikidza hukama hwedu naMwari. Naizvozvo, zvakafanira kuwedzera ushamwari hwedu naBaba.
Kuva padyo naMwari chimwe chinhu icho isu tese tinofanira kuedza. Tinofanira kuziva kuti Mwari anoda zvese nyika uye inoda hukama hwepedyo nemumwe nemumwe wedu. Neichi chikonzero, isu tafunga kuti zvakafanira kugadzira chinyorwa kuti iwe udzidze nacho wedzera kudanana kwako naIYE.
Kubva chemada.online, isu tichaenda kukubatsira iwe kudzidza maitiro ekuwedzera kushamwaridzana kwako naMwari mumatanho mashanu. Totanga here?
1 Ungawedzera sei kushamwaridzana kwako naMwari mumatanho mashanu
1.1 1. Ziva Mwari kuburikidza neshoko rake
1.2 2. Tsvaga nguva yekunamata nekutsanya
1.3 3. Teerera Mwari
1.4 4. Rarama munharaunda
1.5 5. Tenda
1. Ziva Mwari kuburikidza neshoko rake
Svika pakuziva Mwari kuburikidza neshoko rake
Hapana munhu wepedyo nemumwe munhu wavasingazive, uye kuverenga Bhaibheri ndiyo nzira yakanakisa yekuziva Mwari. Tinofanira kuita zvatinoudzwa nemunyori wepisarema. "Ndakachengeta shoko renyu mumoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai" (Mapisarema 119: 11).
Imwe yei Zvinangwa zvikuru zveBhaibheri kushandura hupenyu hwedu. Tinogona kuona munaVaHebheru 4:12.Nekuti izwi raMwari ibenyu uye rinoshanda, uye rakapinza kukunda chero munondo unocheka nekwose; zvinopinda kusvika pakukamura mweya nemweya, majoini uye medulla, uye zvinotonga pfungwa nezvinangwa zvemoyo ”.
Patinoziva Bhaibheri, tinosvika pakuziva Mwari, kudanana kunogadzirwa, tinowana chivimbo uye tinoziva kumirira Mwari, kunyangwe mamiriro ezvinhu asiri akanaka. Kubva muBhaibheri tinoziva kuti Mwari ndiani.
2. Tsvaga nguva yekunamata nekutsanya
Wana nguva yekunamata nekutsanya
Kungofanana newe urikutsvaga nguva yekuona vabereki vako kana shamwari dzako, unofanirwa wana nguva yekunamata nekutsanya, sezvo iriyo chete nzira yekutaurirana naMwari.
Nekudaro, zvakafanira kuti uzive nzira yaunofanira kutaura nayo kunaIshe kuburikidza nemunamato. Kune izvi zvakakosha kuti iwe uzive zvakataurwa naJesu:
Uye pamunonamata, musava sevanyengeri. Vanoda kunge vachinamata mumasinagoge uye pamakona emigwagwa kuti vamwe vavione. Ndinokuvimbisai chokwadi kuti vakatowana mubairo wavo uzere. Asi iwe kana uchinyengetera, enda kukamuri yako, upfige mukova, ugonyengetera kuna Baba vako vari pakavanda; Ipapo Baba vako, vanoona pakavanda, vachakupa mubayiro.
Kusiyana nevatungamiriri vezvitendero venguva iyoyo, vainamata kuti vaonekwe nevanhu, Jesu akanyengetera nekuti aikoshesa kuva pedyo nababa vake.
Kune rumwe rutivi, kutsanya zvakare kunounza ushamwari hwepedyo naMwari, sezvo inotibatsira kure kana kudzikisira kuda kwedu kuteerera kuda kwaBaba.
Pasina kuenda kumberi, vanhu vakave nehukama hwakanyanya naMwari munhoroondo yese vakashandisa kutsanya. Izvi zvakamuita inzwa uye unzwisise kuda kwaMwari zvakajeka. Neiyi nzira vakawana hukama hwepedyo Naye.
Mosesi akatsanya mazuva makumi mana.
Ezra akatsanya mazuva matatu.
Eria akatsanya mazuva makumi mana.
Danieri neshamwari dzake vakatsanya kwemazuva makumi maviri nerimwe.
Jesu akatsanya mazuva makumi mana.
3. Teerera Mwari
Ungawedzera sei kushamwaridzana kwako naMwari mumatanho mashanu: Teerera
Kuteerera mwari yaigara ichionekwa muhupenyu hwaJesu: "Jesu akati:" Zvokudya zvangu kuita kuda kwaiye akandituma uye kupedza basa rake " (Johani 4:34).
Mune imwe ndima yebhaibheri, Jesu akati: "Nekuti ndakaburuka kudenga, kwete kuzoita kuda kwangu, asi kuda kweakandituma" (Johani 6:38).
Kuteerera chinzvimbo, chinoitwa nechirango uye kuzvipira. Tinogona kucherechedza apo Mambo Sauro paasina kuteerera Mwari uye akagamuchira yambiro (1 Sameri 15:22). Isu takaona kuti nekuda kwekusateerera kwake, Sauro akarambwa samambo weIsrael uye zvinhu zvakatanga kumuipira. Sauro akatambisa mukana wake wekuteerera, kukomborerwa, uye kuve neukama naIshe.
Tine zvakawanda kuwana kana isu tichiteerera kuna Ishe. Mwanakomana pachake akateerera kusvika rufu. Patinonyanya kuteerera, patinowedzera kuva pedyo uye nekuva nepedyo kuna Mwari, tinowedzera kuda kuita kuda kwake.
4. Rarama munharaunda
Nzira yekuwedzera kudanana kwako naMwari mumatanho mashanu: Rarama munharaunda
Kana tichinge tava nehukama naMwari, isu tinofara zvekuti tinoda kuigoverana nevamwe, kusanganisira hama mukutenda.
Jesu munhu ane hukama. Neichi chikonzero, hukuru hwehukama hwedu naye, padyo nepadyo patichava nevanhu. Kune kukosha kwekugara pamwe chete, munharaunda (1 Johane 1: 7).
Mumwe muenzaniso wemuBhaibheri watinogona kunzwisisa uri muna 1 Johane 4:20: "Kana mumwe munhu achiti:" Ndinoda Mwari ", asi achivenga hama yake, murevi wenhema, nekuti uyo usingadi hama yake yaanoona, haagoni kuda Mwari, waasingaoni.
Muapositora Pauro anoenderera neimwe dzidziso: "Naizvozvo, hamusisiri vaeni, asi vagari venyika yevatsvene, uye mitezo yemhuri yaMwari" (VaEfeso 2:19).
Jesu anotipa iri gwara rakajeka iro tese tiri vamwe muna ishe. Kubatana kumwe chete, kuzvipira kumwe chete, hupenyu hwakafanana, hukama hwepedyo, hupenyu munharaunda.
“Naizvozvo vese vave vamwe, Baba, sezvo imi muri mandiri uye neni mamuri. Naivowo vave matiri, kuitira kuti nyika itende kuti makandituma " Johani 17:21.
Ungawedzera sei kushamwaridzana kwako naMwari mumatanho mashanu: Tenda
Kuonga hakuna, kana zvirinani haifanire kunge iri, chimwe chinhu chakanangana nenguva dzakanaka. Haisi chete yebasa idzva, imba nyowani, mota nyowani.
Tinogona kuona izvo zvinotaurwa naPaul nezve mamiriro emunhu, kushaya kwake kuzivikanwa kwaMwari, kwekutenda:
"Varume vachava vanozvida, vanokara, vanozvikudza, vanozvitutumadza, vanomhura, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasingadi Mwari."
2 Timotio 3: 2
"Nekuti kuziva Mwari, havana kumukudza saMwari, kana kuvonga, asi mifungo yavo ikava isina maturo, nemoyo yavo isina njere yakasvibiswa."
VaRoma 1: 21
Muna Mapisarema 95:10 tinoona moyo isingaongi yevanhu:
«Kwemakumi mana emakore ndakatsamwira chizvarwa ichocho uye ndikati:» Ivo vanhu vasingaongi pamoyo; havana kuziva nzira dzangu.
Pisarema 95: 10
Iva moyo unotenda unoshandura zvese muhupenyu hwedu. Kuziva maitiro ekuziva kuti Mwari akatipa mukana wekunakidzwa noupenyu.
“Vongai Ishe kuti akanaka; rudo rwenyu runogara nekusingaperi " .
Pisarema 107: 1
Nekuti izvo kutenda nekurumbidza zvinofambiranaNekuti patinorumbidza Ishe, tinoratidza kuonga kwedu uye tinobvuma runako rwake.
Ngatigarei tichionga, zvisinei nemamiriro ezvinhu, uye tichiyeuka kuti Anogara achitsvaga zvakatinakira. Kuva nemoyo wekutenda kunogadzira hukama hwepedyo naIshe.
"Uye tinoziva kuti zvinhu zvese zvinobata pamwe kuti zvinakire avo vanoda Mwari, ndiko kuti, avo vakadanwa sezvaakafunga."
"Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinadzo pamusoro pako, anodaro Jehovha, ndangariro dzerugare, uye kwete dzezvakaipa, kuti ndikupe mugumo waunotarisira."
Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira kuti unzwisise maitiro ekuwedzera kushamwaridzana kwako naMwari mumatanho mashanu. Kana iwe ikozvino uchida kudzidza ku nzira yekunamata zvakanaka maererano nebhaibheri, tinokurudzira kuti uenderere mberi nekuvhura chemada.online.